Wararka Maanta: Talaado, May 28, 2013-Shirweynaha dib u dhiska iyo Maal-gashiga Soomaaliya oo Maanta si Rasmi ah uga furmay Magaalada Nairobi (SAWIRRO)
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay'ada Hanvard qaybteeda qaarada Afrika ayaa loogu magacdaray maalgashiga Soomaaliya.
Waxaa qabanqaabiyayaasha shirkan ay ku tilmaameen in ujeedkiisu yahay dib u dhis iyo maalgashi ballaaran oo laga sameeyo Soomaaliya, loona gogol xaaro sidii ay dalka u maalgashan lahaayeen shirkadaha ajaanibta iyo kuwa maxalliga ahba.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya oo furay shirka ayaa ku tilmaamay soo qabanqaabiyayaashii inay dalkooda wax wayn u qabteen dawlada Soomaaliyana ay garab taagantahay qorshaha lagu doonayo in lagu maalgashado Soomaaliya.
"Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso cidwalba oo doonaysa, inay maalgashi ka samaysato" ayuu yiri Cali Ameeriko.
"Soomaaliya maantay waxay gashay marxalad cusub, waxayna diyaar u tahay inay u fududeeyaan cidwalba oo doonaysa inay halkaa ka samaysato maalgashi, waxaanan ku boorrinayaa dadka Keenyaanka ah inaan fursadaas looga hormarin" ayuu yiri Affey.
Maxamuud Axmed Xasan Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in bogga cusub ee Soomaaliya ay bilowday inuu yahay mid rajo wanaagsan u xambaarsan gobolka iyo wadamada caalamka.
"Soomaaliya waa waddan xudun u ah ganacsiga gobolka iyo caalamkaba, waxayna maalgashiga dalkeenu noqonaysaa mid ay ka faa'iidaan dhammaan shirkadaha caalamku" ayuu yiri wasiirku.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed C/laahi Cumar oo khudbad ka jeediyay shirweynaha maalgashiga Soomaaliya ayaa ka sheekeeyay fursadaha ballaaran ee maalgashi ee ka jira Soomaaliland.
"Somaliland labaatan iyo labo sano ayay ku jirtay xasillooni buuxda, waxayna soo dhawaynaysaa cidii doonaysa inay maalgashadaan dalkeena" ayuu yiri Maxamed C/laahi.
Safiirka dawlada ingiriiska u jooga dalka Soomaaliya Ambassador Matt Baugh oo shirkaasi ka hadlay ayaa isna ku tilmaamay dawlada ingiriisku inay tahay saaxiib ay Soomaaliya leedahay, isagoo tusaale u soo qaatay shirkii London ee dhawaantan dhacay iyo furitaanka safaarada Britain ee magaalada Muqdisho oo ahaa tallaabooyin lagu taageerayay shacabka iyo dawlada Soomaaliyeed.
Xassan Nuur oo ah madaxa hay'adda Hanvard qaybteeda Afrika oo hay'adoodu ay shirkan qabanqaabisay ayaa sheegay in kasoo qaybgalka ballaaran ee shirka ay muujinayso in lagu guulaystay ujeedkii shirka oo ahaa in la isu keeno dhammaan dadka uu khuseeyo maalgashiga iyo dib u dhiska Soomaaliya.
"Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin imaanshihiina, shirkaani wuxuu tusaale u yahay horumarka dhaqaale ee aynu doonayno inaanu dalkeena gaarsiino, waana guul" ayuu yiri Xassan.
Shirkan oo socon doona ilaa iyo maalinta barri ah ayaa lagu soo bandhigay shirkado kala duwan oo doonaya inay dhawaan ka hawlgalaan Soomaaliya, kuwaasoo soo bandhigay qaar kamid ah adeegyadooda iyo badeecadaha ay iib geeyaan.